Olukhethekileyo Pink 15.38 eqatywe diamond uthengisa ngenxa $ 31.6 million
diamond epinki, Pink iyodwa
inkulu Fancy eziqaqanjisiweyo ndandibabona pink diamond emilisiweyo ihlabathi yaphinda zifundiswa fandesi Sotheby ngayo eGeneva, i pink Unique leyo Abathengiswa $ 31.6 million.
Onke anqabileyo kunye iidayimani bebala kufuneka kungabonwa ngeliso lenyama ubungakanani umbala wawo, njengokuba xa uqala yembonakalo ebalulekileyo. Ukuthatha inkcazo Lombala isiqinisekiso yedwa unika kuphela inxalenye yebali.
iidayimani pink unako kuphahla iintlobo ezimibalabala, ukusuka purplish ukuba orangey ukuba ngqombela, kwaye oku yimani li ipinki ubekhuthele elimangalisayo olubonakala ukubonisa unomona kancinane ebomvu, iyenza eyodwa ngokwenene. Ngokungafaniyo nezinye iidayimani ezinemibala apho wentlaba ibangelwa kwenkolo omnye atom ezifana nitrogen okanye boron, kunye iidayimani pink umbala yenzeka ngenxa gqwetha okanye uxinezeleko lwesakhiwo yikristale xa kwasekwa kwizigidi zeminyaka eyadlulayo.
Olukhethekileyo Pink 15.38 eqatywe diamond lazithwebula yi Cora International, inkampani aziwa ehlabathini ekuveliseni iidayimani ezinqabileyo zobungakanani ezinkulu nemibala ocacileyo engayiwayo. Umsebenzi ukulisika ipolishi le yikristale rough ange waqala iinyanga ezininzi isigqibo ukuphumeza indlela umbala ukuba amandla ayo oluphezulu, kwaye kukho abathezi bambalwa kakhulu ehlabathini ngubani bathathe lo mngeni kuphela.
Kukho nto umngcipheko ekugawuleni nayiphi nedayimani, ilifinyeze ilitye omibalabala na ezinzima ngakumbi njengoko ufuna ukwenza umbala ndomelele kangangoko ngokwazana ukuba avuya embindini ilitye. Xa ukusika iidayimani ezimhlophe, elo qhinga malunga luyafuneka ukwenza kubo khangela ezingenambala. Kunzima kakhulu ukuba umlinganiselo umbala ekugqibeleni edayimani pink ngoxa ulisike ivili njengoko unako shushu okomzuzwana ukwenza kubo ukutshintsha umbala, ngoko onaloo uya kuyibona imiphumo yinyaniso kude nedayimani lupholile phantsi.
The Gemological Institute of America amabakala phantse yonke iidayimani ibalulekileyo ehlabathini zonke dayimani angeniswe elebhu kunyaka ngamnye hayi ngaphezulu kwesithathu ekhulwini zihlelwa idayimani bebala. nganye Ngaphantsi amahlanu ekhulwini kwezo iidayimani ezinemibala becala pink. Eli litye ke nazo zihlelwa njenge IIA Uhlobo leyo uhlobo yeyona iikhemikhali olunyulu nedayimani esekelwe phezu ukungabikho nitrogen. ezimbini kuphela pesenti bonke dayimani khethwa uboniso le elubala ezingaqhelekanga.
Ngaphandle kumnini omtsha ukuthenga elinye matye odidi wendalo yena okanye yena uya kuba nako kwakhona ilitye, nje ukongeza ekwahlukeni yayo.
Blue Diamond uthengisa ngenxa $ 58 Million
Baphuon Auction Bangkok Bangkok Gems and Jewellery Fair Biggest Diamond Blue Diamond Iimayini zegolide Iimayini zegolide Gems iigatye ezivela esibhakabhakeni amatye wholesale giant Diamond Isikhokelo ukuphilisa amakristali Jayesh Patel Jewellery wobuyiselo Ruby magemveli ukuvula diamond epinki amaxabiso Royal Opal ilitye elinqabileyo elibomvu siskemu Siem Reap Somadevi idayimani zokwenziwa Neempahla ezininzi ezintle phezulu sase ukhenketho Pink iyodwa World Record
Inkwenkwezi yenkwenkwezi yenkwenkwezi: https://t.co/M8nqZ4Qd9D ngokusebenzisa @YouTube iintsuku 12 eyadlulayo
I-opal opal: https://t.co/gzSdlE1d5O ngokusebenzisa @YouTube iintsuku 12 eyadlulayo
Paraiba tourmaline: https://t.co/HOicGTC6yn ngokusebenzisa @YouTube iintsuku 12 eyadlulayo
I-ruby yenkwenkwezi ye-Synthetic: https://t.co/LrskchkJGK ngokusebenzisa @YouTube iintsuku 12 eyadlulayo